‘ကျွန်မက မဟေသီ’ ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အခက်အခဲများကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အောင်ရေချမ်း - ZeeKwat
ZeeKwat Job Service
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ ကြာသီး ၊ ကြာစေ့…
သုတ်ပိုး အားကောင်းစေတဲ့ ထိပ်တန်း အစားအစာများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ စတင် ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ချွေတာရေး နည်းလမ်းများ….
အသားဖြူစေမယ့် ဆန်မှုန့်တိုနာအကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
Home » Celebrity News » ‘ကျွန်မက မဟေသီ’ ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အခက်အခဲများကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အောင်ရေချမ်း
‘ကျွန်မက မဟေသီ’ ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အခက်အခဲများကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အောင်ရေချမ်း
MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်းက လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိတဲ့ ‘ကျွန်မက မဟေသီ’ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွဲလေးက ပရိသတ်များရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမ သျှင်မ ရဲ့ ဝထ္တု ကို မူရင်းနာမည် အတိုင်း ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ‘ပျားရည်အိုင်’ ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိထားတဲ့ အောင်ရေချမ်းက ယခုဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ ခင်ပွန်းနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အဓိက ဇာတ်ဆောင်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
အောင်ရေချမ်းက သူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ‘ကျွန်မက မဟေသီ’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက သူ့ရဲ့ကာရိုက်တာအနေအထားနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပုံစံကို အခုလို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်မေ့တဲ့သူအနေနဲ့ အတိတ်ကို နောက်ကြောင်းပြန်ကောက်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်လို သရုပ်ဖော်ရတာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ရတာ သူ့အတွက် ပိုခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အတိတ်မေ့တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် ပိုခက်ခဲတယ်။ အတိတ်မေ့တဲ့ ပုံစံကို ပရိသတ်က ပေါ့တယ်လို့ ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ပုံစံကိုက အဲဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။ အတိတ်မေ့သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ချက်တစ်ချက် လွတ်လွတ်သွားမယ်၊ စကားပြောတာနည်းလာမယ်၊ အတိတ်ကို ပြန်ပြန်ကောက်နေရတဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်လေး ဖြစ်မယ်” ဆိုပြီး သူသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကာရိုက်တာအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။
လူငယ်သဘာဝ လွတ်လပ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဆိုးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားတဲ့ သူပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးသည်အကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားရင်း နည်းနည်းအေးတဲ့ သူပုံစံ စတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုး သရုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“မင်းမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ နဂိုပုံစံကိုက သမာသမတ်ကျတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုးခဲ့ပေမယ့် ကျူရှင်ဆရာလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သွားပြီး စံမြန်းနဲ့ လင်မယားချင်း စကားများရင်တောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် နဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ပြီး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့စကားပြောတယ် ဆိုတော့ မိန်းမချောနဲ့သူနဲ့အရင်က ဒီလိုပုံစံမျိုးလားဆိုပြီး အတိတ်ကို ပြန်ပြန်စဉ်းစားရင်း နည်းနည်းအေးတဲ့သူတစ်ယောက် ပုံဖြစ်သွားတဲ့ ပုံစံဖမ်းရတာဖြစ်တယ်” လို့ ဆက်လက် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဗီဒီယိုကားတွေ ပြန်ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုကားတွေ ထွက်လာရင်လည်း ပရိသတ်ကြီးက အားပေးစေချင်ပါတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့အနေနဲ့ ဒရမ်မာဘက်ကို ပိုအားသန်လို့ ဒရမ်မာကားတွေကို ရိုက်ချင်တယ်လို့လည်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
MRTV-4 ရုပျသံလိုငျးက လကျရှိ ထုတျလှငျ့ပွသလကျြရှိတဲ့ ‘ကြှနျမက မဟသေီ’ မွနျမာဇာတျလမျးတှဲလေးက ပရိသတျမြားရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနတေဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံကြျောစာရေးဆရာမ သြှငျမ ရဲ့ ဝထ်တု ကို မူရငျးနာမညျ အတိုငျး ပွနျလညျရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး ‘ပြားရညျအိုငျ’ ဇာတျလမျးတှဲနဲ့ ပရိသတျအသိအမှတျပွုမှုကို ရရှိထားတဲ့ အောငျရခေမျြးက ယခုဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ အမြိုးသမီးနှဈဦးရဲ့ ခငျပှနျးနရောကနေ သရုပျဆောငျထားပွီး အဓိက ဇာတျဆောငျနရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတာပါ။
အောငျရခေမျြးက သူ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ‘ကြှနျမက မဟသေီ’ ဇာတျလမျးတှဲထဲက သူ့ရဲ့ကာရိုကျတာအနအေထားနဲ့ သရုပျဆောငျရတဲ့ ပုံစံကို အခုလို ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။ အတိတျမတေဲ့သူအနနေဲ့ အတိတျကို နောကျကွောငျးပွနျကောကျရတဲ့ သူတဈယောကျလို သရုပျဖျောရတာကွောငျ့ သရုပျဆောငျရတာ သူ့အတှကျ ပိုခကျခဲတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“အတိတျမတေဲ့လူတဈယောကျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျရတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပိုခကျခဲတယျ။ အတိတျမတေဲ့ ပုံစံကို ပရိသတျက ပေါ့တယျလို့ ထငျရငျထငျလိမျ့မယျဆိုပမေယျ့ သူ့ရဲ့ပုံစံကိုက အဲဒီလိုဖွဈနတောပါ။ အတိတျမသှေ့ားတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ တဈခကျြတဈခကျြ လှတျလှတျသှားမယျ၊ စကားပွောတာနညျးလာမယျ၊ အတိတျကို ပွနျပွနျကောကျနရေတဲ့သူ တဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျ နညျးနညျးကွောငျတောငျတောငျလေး ဖွဈမယျ” ဆိုပွီး သူသရုပျဆောငျရတဲ့ ကာရိုကျတာအပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ ။
လူငယျသဘာဝ လှတျလပျခငျြတဲ့ စိတျနဲ့ ဆိုးခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျး တညျငွိမျရငျ့ကကျြသှားတဲ့ သူပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးသညျအကွောငျးကို ပွနျစဉျးစားရငျး နညျးနညျးအေးတဲ့ သူပုံစံ စတဲ့ ကာရိုကျတာမြိုး သရုပျဆောငျရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“မငျးမြိုးနှယျဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျရဲ့ နဂိုပုံစံကိုက သမာသမတျကတြယျ။ ငယျငယျတုနျးက ဆိုးခဲ့ပမေယျ့ ကြူရှငျဆရာလုပျပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ တညျငွိမျရငျ့ကကျြသှားပွီး စံမွနျးနဲ့ လငျမယားခငျြး စကားမြားရငျတောငျ တိုးတိုးတိတျတိတျ နဲ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျခဈြပွီး ကွငျကွငျနာနာနဲ့စကားပွောတယျ ဆိုတော့ မိနျးမခြောနဲ့သူနဲ့အရငျက ဒီလိုပုံစံမြိုးလားဆိုပွီး အတိတျကို ပွနျပွနျစဉျးစားရငျး နညျးနညျးအေးတဲ့သူတဈယောကျ ပုံဖွဈသှားတဲ့ ပုံစံဖမျးရတာဖွဈတယျ” လို့ ဆကျလကျ ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ ဗီဒီယိုကားတှေ ပွနျရိုကျဖို့စီစဉျနတောဖွဈပွီး ဗီဒီယိုကားတှေ ထှကျလာရငျလညျး ပရိသတျကွီးက အားပေးစခေငျြပါတယျလို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ နောကျပွီး သူ့အနနေဲ့ ဒရမျမာဘကျကို ပိုအားသနျလို့ ဒရမျမာကားတှကေို ရိုကျခငျြတယျလို့လညျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Download Zeekwat Mobile App
၁၆ ပဲရည် ၁၀၅၆၅၀၀ ၁၀၅၄၅၀၀
၁၅ ပဲရည် ၉၉၄၃၀၀ ၉၉၂၉၀၀
YANGON 945 955 755 850
BAGO 965 975 785 865
NAYPYITAW 985 1000 805 900
MANDALAY 960 980 805 900
MEIKHTILA 980 1000 810 910
AYAWADDY 980 990 800 950
MON 980 990 800 890
SAGAING 985 1000 820 -